211info.org ama 211. Hel caawimaada bixinta guryiynta, korontada iyo biyaha, raashinka, daryeelka ilmaha, iyo wax badan.
Healthcare.oregon.gov ama 1-855-268-3767. Haddii aad lumiso ama aadan haysan caymis caafimaad, waxaad u-qalmi kartaa qorshe caafimaad oo bilaash ah ama qiimo jaban.
Macluumaadka Suuqa Shaqada. Nidaamka Macluumaadka Suuqa Shaqada ee Oregon wuxuu bixiyaa xogta shaqaaleynta hadda jirta, warbixino khaas ah, iyo shaqooyinka la soo dhejiyo hadda. Dhegaatiga Shaqooyinka & Xirfadaha Shaqo ayaa kuu suurta gelin doona inaad hesho gunnooyinka, koboca shaqo ee saadaasha ah, iyo shaqooyinka furan ee in ka badan 700 shaqo. Booqo www.qualityinfo.org si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Hindisaha Xasilinta Lahaanshaha Guri ee Oregon Tan iyo 2011, waxaan ka caawinay in ka badan 16,000 qoysaska ku nool Oregon inay guryahooda ilaashadaan. Haddii xaaladdaada dhaqaale ay hadda isbeddeshay ama aad ku dhibtoonaysay in muddo ah, adiga ayaan halkan kuu joognaa.
Ammaan + Oregon Xooggan. Raadi dhigaalo aad uga gudubto COVID-19 si ammaan ah si aad adiga, qoyskaaga iyo bulshadeenu u sii ahaato mid xooggan.